Uri kutsvaga saiti yekudzidza chiGerman? Mirira, wauya kunzvimbo chaipo! Iyi ndiyo huru yeTurkey yeGerman yekudzidzisa chikuva almancax.
Pane yedu webhusaiti www.almancax.com, avo vasingataure chiGerman zvachose, vanodzidza chiGerman pachavo, avo vanoda kuvandudza yavo yeGerman, yechikoro chevadzidzi uye vadzidzi vechikoro chesekondari vanodzidza nyore chiGerman uye nekuvandudza yavo yeGerman.
Saiti yedu ine zvese zvaunoda kuti udzidze chiGerman. Zviono uye zvakanyorwa zvidzidzo zveGerman, vhidhiyo zvidzidzo zveGerman, mitambo yemazwi echiGerman, mafomu eGerman ekufunda emafoni eApple, maforamu eGerman neGerman, sevhisi yechiGerman yemahara, mabhuku echiGerman nezviuru zvezvidzidzo, zvinyorwa uye mafaera atisingakwanise kuverenga, anowanikwa pane edu saiti.
Ndeapi makosi anowanikwa pane yedu saiti, isu takanyora muchidimbu mamwe acho pazasi. Nekubhurawuza saiti yedu, iwe unogona kuwana zvimwe zvakawanda zvechiGerman zvidzidzo uye unakirwe nekudzidza chiGerman online kubva pachigaro chako. Muenzaniso misoro yemisoro kubva kune zvimwe zvidzidzo zveGerman pane yedu saiti zvinotevera.
Kunze kwezvidzidzo zviri pamusoro, mimwe misoro yedu inobatsira shamwari dzinodzidza chiGerman ndedzinotevera. Unogona kuwana zvimwe nekuvhura saiti yedu.
Zvidzidzo zveGerman zveVatangi
Zvidzidzo zveGerman zveGrade 11 ne12
Zvidzidzo zveGerman zveGiredhi 10
Zvidzidzo zveGerman zveGiredhi 9
Zvidzidzo zveGerman zvePuraimari uye Middle Chikoro Vadzidzi
German Sports uye German Sports
Concepts yezita rechiGerman (Declination Der Substantive)
German Numeri, German Numeracy, German Numeral
Zita rechiGerman re Hali (German Genitiv) Kucherechedza
German Weather Forecast
German Numbers uye German Numbers Numeri
Specific Articels (Bestimmte Artikel)
Zita rechiGerman -E Hali (Dativ) Kucherechedza
Magwaro echiGermany (Geschlechtswort)
Kufa kupindirana muchiGerman
Nhanganyaya kuGerman - Basic German neGerman Grammar Zvidzidzo
MuGermany, Aripi Articels Inoshandiswa, Ndeipi Kwokushandisa, Ungashandise Sei?
German Pronouns uye Shots Related
Zita rechiGerman -i Hali (German Akkusativ) Kuverenga
Zviratidzo zveGermany Zvichienzaniswa
German Pronouns, ChiJerman Mubvunzo Anotaura
Substantiv muchiGerman - Genitiv
10a German Nhamba dzevana
VeGermany Veji (nemifananidzo)
ChiGerman chaiva chimiro cheLecturing Pattern
Nhamba yeGermany Nhamba dzekuverenga, Ordinalzahlen
German Numbers (Illustrated)
Kusarudzwa kweAjjectives maererano neGerman Nouns (Deklination des Adjektivs)
German Nouns Substantive
Mazano muchiGerman (Adjektiv-Deklination)
Vashanduri vechiGerman uye zvirevo zvechirevo
ChiGermany Chisingazivikanwi Articels (Unbestimmte Artikel)
ChiGerman Trennbare Verben (Mavara Anoparadzaniswa)
Kunze kwezvidzidzo zvedu zveGerman pamusoro, unogona kuwana zviuru zvemimwe misoro yaunogona kudzidza chiGerman pane yedu webhusaiti uye maforamu.
Tinokudai iwe kubudirira mukudzidza chiGerman.
German lessonssei kudzidza chiGermandzidza germangerman kudzidza saitigerman yekudzidzisa saitionline chi German lessonsdzidza chiGerman online
Kukurudzira Kwakarurama, Zvibereko Zvinobudirira muDzidzo yeChirungu…
Nhamba dzeGerman, mwedzi, mwaka, maawa eGerman,…
Kutaura Chirungu semutauro waamai vako hachisi chishamiso